Ngwunye nke ọzọ na Nicky Verstappen - Jos Brech psyop? Ụmụaka ndị na-akpali agụụ mmekọahụ hụrụ! : Martin Vrijland
gbara akwụkwọ Gbanwee NICKY, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 20 September 2018	• 12 Comments
Ọ bụrụ na ị, dịka Onye Ọchịchị Ọha, na-arụ ọrụ ruo ọtụtụ afọ iji kwadebe ndị mmadụ maka usoro ọhụrụ site na PsyOp (arụmụka uche), mgbe ahụ, ị ​​ga-eme nke ọma hụ na ị nwere ụmụ bebi kwesịrị ekwesị n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị iji nọgide na akụkọ banyere mwute ahụ. ịkpụgharị. Nke ahụ pụtara na ị ga - ejikwa onye ọka iwu kwadoro, onye na - enweta nkwenye na - akwadoghị, ma n'otu oge ahụ ị na - enweta ọhụụ ọhụrụ ịchekwa ikpe ahụ. N'okwu ebere ọ bụ naanị banyere nghọta nke ndị mmadụ ma ọ bụghị banyere usoro iwu ziri ezi. N'ọdịdị ọdịdị ya. O nwere ike ịbụ na ihe gbasara Nicky Verstappen gbasara mmalite nke data DNA nke mba? Gerald Roethof bụ otu n'ime ọkàiwu PsyOp mba ahụ?
Na mberede e nwere akụkọ a taa foto ụmụaka ẹkụt ke Jos Brech. N'oge a Jos Brech na-efu ma ọ dịtụbeghị okwu banyere ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ụmụaka, ma n'ihi na enwere obi abụọ na-amalite n'etiti ndị mmadụ, n'ihi ihe ndị Martin Vrijland dekọrọ, otu ga-eji ihe ọhụrụ pụta. Jos Brech ga emechibidoro site n'èzí, nke a na-enweghị ike inweta site na ekwentị ma ọ bụ kọmputa biri ndụ dị ka ihe na-esote. Ma! O nwere ụmụ okoro na-akpali agụụ mmekọahụ na ya! Ee na nri. Ma ọ bụ nke ahụ ka nọ na PC ochie nke ọ hapụrụ n'ụlọ? Ọfọn, ya na ihe nwere ike ime nke iwu iwu, ị amaghị ihe nwere ike itinye na pc (ma ọ bụrụ na achọrọ).
Ugbu a i nwere ike ikwu, sị: "Ọ bụrụ na ha na-atụgharị uche na PsyOp, ha gaara ekwu na ọbara ma ọ bụ mkpụrụ dị n'ahụ Nicky Verstappen?"Nke a siri ike, n'ihi na ikpe a na-agbazi afọ 20 na nke ahụ ga-apụta na a ghaara mara nke a ruo ogologo oge. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị kpebie ikpebi onye na-arụ ọrụ, ị ghaghị iwuli akụkọ ahụ gburugburu ya. Ebe ọ bụ na ọ dịghị mgbe ọ bụla nkatọ siri ike site na mgbasaozi ma ọ bụ site na mgbasa ozi ọzọ banyere okwu a, ọ dịghị mkpa iji gbalịa gbalịa gbanwee echiche nke ndị mmadụ. Onye ọ bụla na-agbaso akụkọ banyere Peter R. de Vries na mgbasa ozi, nke mere na ọ na-agbapụ na ihe mgbaru ọsọ. Otu ụlọ ahịa. Ugbu a na Martin Vrijland nọ na-eme onwe ya ka ọ bụrụ onye nkatọ ruo ọtụtụ afọ, ọ dị mkpa iji meekwu ntakịrị mgbalị iji gbanwee akụkọ ndị ahụ. Ọ bụghị na achọrọ m iti onwe m ihe, ma ọ bụ na-egosi na mgbasa ozi ndị ọzọ nọgidere na-elekwasị anya na UFO, 911 na ndị ọzọ 'na-egosi ihe ndina'. E nwere ihe n'okpuru anyanwụ na nke ahụ meer bụ maka imejuputa iwu na iwu dị iche iche n'ihi nsogbu onwe onye, ​​site n'echiche 'Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta'. Na nke ahụ na-eme na ebe a ma ugbu a na Netherlands.
Ọ dịtụghị mgbe a na-egbu ọchụ na ikpe Nicky Verstappen, ebe ọ bụ na a dịghị egosi mmadụ igbu ọchụ; e nweghikwa ihe kpatara nsogbu a, n'ihi na NFI enweghị ike igosipụta nke a. Enweghi ihe akaebe nke igbu mmadu ma obu ebubo obula. N'ihi nke a, a ga - egbochi ikpe ahụ (nke bụ mgbe ọ bụla) ga - egbochi mgbe afọ 20 gasịrị. Eziokwu ahụ bụ na a na-elebara ikpe ahụ anya zuru oke tupu oge njedebe nke oge a nwere ike ịrụ ọtụtụ ebumnuche. Ikekwe, anyị nwere ike ịtụ anya na a ga-ewepụ oge ikpebibi iwu, ma ọ dịkarịrị mkpa, ikpe a (dị ka okwu ole na ole gara aga) ga-eduga na ịnakwere ihe nchekwa data DNA mba n'etiti ndị mmadụ. Ihe nchekwa data DNA nke ndị uweojii na ikpe ziri ezi nwere ike itinye na-akparaghị ókè.
Ọpụpụ ozi nke taa otu ugboro ọ na-aghọ nke doro anya na ọ dịghị ikpe. E nwere ọbara, ọ bụghị ụdị ọbara (ọbụnadị na mpaghara mmekọahụ) na enweghị ihe ọ bụla nke na-egosi na e gburu mmadụ. E gosipụtara nke a ọzọ taa. Ma nke ahụ achọghị ka ìgwè mmadụ nụ! Emepụta ihe mgbasa ozi site na ụlọ ọrụ mgbasaozi na Peter R. de Vries na mbiet onye pedophile nke gbagara. Ma ọ ghaghị ịkwasa! Onye ọka iwu naanị aghaghị igosi ihe ngosi nke mkpọ ikpeazụ ahụ nke na-agba mbọ ịgbachitere egwu ahụ dị egwu! "Huh, gini ka nzuzu nke onye oka iwu chere?"Ya mere iji nọgide na-eduzi echiche ahụ na ntụziaka ahụ achọrọ, ọ na-ebugharị ugbu a na ihe nke abụọ na Jos Brech na mberede" enwere ụmụ foto na-akpali agụụ mmekọahụ ". Otu ihe kpatara nke a, e mere ka usoro ikpe ya tupu ụbọchị ikpe na 90.
Ka m bụrụ ihe doro anya: Martin Vrijland abụghị onye na-agbachitere pedophiles ma ọ bụ ndị na-azụ ụmụ na / ma ọ bụ ndị na-egbu ọchụ. Kama nke ahụ! Martin Vrijland bụ onye na-agbachitere nzuzo na nnwere onwe ndị a na-ejedebe site na aghụghọ na aghụghọ site na arụmụka uche (PsyOp's), na-egwu site na 'Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta '. Echiche ahụ ebe a nsogbu a na-ejere ndị mmadụ ozi site na mgbagwoju anya na mmekọrịta ya na ndị ọrụ dị mkpa; a mmeghachi omume kpalitere site na otu mgbasa ozi ahụ na ndị mmadụ dị ka Peter R. de Vries; otu mgbe ngwọta iji ruo ndị a na-agaghị anabata ma ọlị n'enweghị nsogbu a n'onwe ha. Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na otu ọkàiwu a ma ama ma ọ bụ onye mgbasa ozi nwere obi ike iji kpughee omume ndị a. Ruo oge ahụ, ọ bụ gị ka ị ga-ahụ. Atụla anya na ọ ga-esi n'aka ndị akwụna nke ike.
Ị kwenyere n'echiche n'ezie gbasara okwu a ma nyochaa ma enwere m ike ịnwe isi, n'egbughị ozugbo wepụ ya dị ka 'nkwenkwe izu nzuzo ọzọ na-ezighị ezi' (ma ọ bụrụ naanị n'ihi na nzuzo gị bara uru) bụ), weghaara nsogbu iji nyochaa faịlụ ahụ niile njikọ a ka ị pịa.
Site n'ikike iwu, ọ dịghị ihe ọ bụla dị njọ n'okwu a, ị gaghị enwe ike ịchọrọ onye ikpe na ikpe na-adịghị mgbe ọ bụla a na-egbu ọchụ ma ọ bụ okwu ọjọọ. Ya mere, ị gaghị enwe ike ịgbatị tupu ikpe ahụ ma ọ bụrụ na ịnweghị ikpe ikpe; dịka ị na-enweghị ike ime nke a ma ọ bụrụ na ị nweghị mmegbu. Ị chọpụtawo nwatakịrị nwụrụ anwụ, nke igbu ọchụ ma ọ bụ igbu ọchụ, ma ọ bụ mmegbu a nwapụtara ma yabụ na ị gaghị enwe nchekasị. Ya mere, ị gaghị enwe ike ịgbatị tupu ikpe ahụ ma ọ bụrụ na ịnweghị nkwado ọ bụla. Ịchọta DNA enweghị ihe ọ bụla (lee nkọwa a dị mkpa banyere nke a ebe a). Ihe omimi di omimi (nke puru imata) nke umu ihe omimi nke nwa ya enweghi ihe ozo nyere n'iwu igbu mmadu na nke a ime (n'ezoghị n'eziokwu na NFI egosighi ihe a niile). Ihe mkpuchi egwu niile na-eti ka anyị mara na anyị na-emeso otu ọmịiko ebe a. 'Nọgidenụ na-ekwugha ụgha ọzọ ma onye ọ bụla ga-ekwere ya', ka onye amụma Hitler na-ekwu okwu mgbasa ozi bụ Joseph Goebbels kwuru.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: telegraaf.nl, telegraaf.nl
Tags: Afọ 20, 90, ọkàiwu, ụbọchị, database, DNA, agba, Gerald roethof, Jos Brech, foto ụmụaka, itoolu, Nicky Verstappen, ikpe, ndenye ọgwụ, oge njedebe, tupu ikpe
20 September 2018 na 20: 48
NRC na-akpachara anya ma na-ekwu banyere Jos B. na-enyo enyo na ...
20 September 2018 na 20: 55
Enweghị ihe ọ bụla ọzọ kpachara anya banyere nke a, n'ihi na ịnweghị ike ịchọrọ onye a na-enyo enyo n'okwu ikpe ebe NFI gosipụtara igbu ọchụ, igbu mmadu ma ọ bụ mmegbu.
23 September 2018 na 15: 09
Nanị m chọrọ ịsị na e nwere ọdịiche dị iche n'iweta akụkọ ahụ. Ọzọ akụkọ na DNA nọ na ndị underpants. Ka o sina dị, nnukwu okpu. Enwetara m akụkọ ahụ na atụ egwu nke ikwughachi ya.
20 September 2018 na 22: 42
Ọ bụ ihe ijuanya na a chọpụtarala ụdị 6 DNA nke ndị dị iche iche na Nicky Verstappen, ma na 1 nwere ike ịmatakwu ya, igbu ọchụ ma ọ bụ igbu ọchụ ma ọ bụ mmegbu. Ihe niile adịghị edozi, mana o doro anya na otu onye a na-enyo enyo. Jos Brech nọ n'ọhịa maka afọ 5 ma ọ bụ otú ahụ, site n'ebe ahụ ọ na-ebudata foto ụmụaka. N'ebe ọ bụla ọ batara ya, ị naghị anụ, ọ bụrụ na ọ nweghị PC ma ọ bụ laptọọpụ ma ọ bụ Smartphone. Ọ nwere WiFi ma ọ bụ 5G internet n'ime ohia, ana m ekwu ihe.
20 September 2018 na 22: 55
Ọ bụrụ na ị nwere echiche na ị nwere ike ịbụ onye a na-enyo enyo na ụdị ikpe ahụ ma ị ga - agba ọsọ, ọ ga - adị m ka ị na - atụba PC gị n'ime ogwe ọkụ ma na - akụtu diski ike maka nke abụọ wee debe ya n'ụzọ dị anya. ...
Na nkenke: enweghi ike
21 September 2018 na 07: 48
Onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ (m amaghị onye ma ọ bụ na akụkọ zuru oke) weere na chances dị ukwuu na Jos Brech nwere mmetụta uche ka nwa nke 12. Ma eleghị anya na Jos Brech ọhụrụ Jasper Steringa?
Ee, kpọmkwem, dịka ozi ọma kachasị dị na mbụ, a chọpụtala ọtụtụ DNA, ma Jos Brech ga-agbatị? Ọ bụ ezie na ọ bụghị onye ikpe mara, ọ nwere ike jikọta na ya! Na nwa okoro na-ese foto nwere ihe mere iji jide ya maka ọnwụ na 'mmekọahụ' mmegbu na Nicky Verstappen ogologo ??
Nke a ga-abụ mgbasa ozi psy-Op ala Jasper Steringa!
21 September 2018 na 09: 45
M na-ahụkwa ihe dị ịrịba ama nke na ugbu a bụ nanị ịkpọtụ foto ndị na-ese foto ụmụaka. Ndi mmadu na-ahukwa na o nweghi ihe o bula, ma o kwesiri ka Jos B. mechie ya, n'ihi na oburu na ihe ndi ahu adighi adi? Ma ọ bụ iji tinye uche n'echebara ya echiche? Ee, m na-atụchasị nke a. Enwere otutu ihe a ma obu ihe di iche na nke a.
* Ọ bụ Jos B ka ọ na-abanye na foto a mgbe otu egwuregwu 1-on-1 na ndị ikwu ya abụọ (nke na-agaghị ekwe omume) ma ọ bụ na-adabere na njirimara onwe onye? A na-akọcha ha abụọ na ọkwa dị iche iche, na mgbe ụfọdụ ọbụna ma.
* Ọkàiwu anaghị ekwupụta okwu banyere ụdị ikpe nke Jos B. Gịnị kpatara? Ọ maghị nke ahụ, ma ọ gọnahụrụ ya? Ka ọ na-agbachi nkịtị? Ntak emi owo mîkọfiọkke n̄kpọ?
* Gịnị mere Jos B ji gbaa ajụjụ ọnụ ugboro abụọ dị ka onye akaebe ma ọ bụrụ na a gụọ ya dịka onye na-agafe? Ma ọ bụ na ọ hụla ihe, ma ọ bụ, ọ dịghị mkpa ịza mmadụ ugboro abụọ. Enwere ike ịjụ ya ngwa ngwa mgbe a na-edebe ya. Ndien ntak emi enye ekpetịn̄de ọnọ nditọ ke ini utọ n̄kpọ emi, enye ekedi ata ntiense?
Agụgharịwo m akwụkwọ ahụ bụ 'Ọnwụ ọnwụ nke Nicky Verstappen' nke Simon Vuyk dere. Ogbugbu nke imebi ụmụaka na gburugburu ogige ahụ na Heibloem dị ọbụna karịa ka m chetara n'oge ikpeazụ m gụrụ akwụkwọ ahụ. Ihe na-egosi na ndị nlekọta ogige nwere ihe jikọrọ ha na ya bụ legion na ike.
Kampoudste Joos B mere ihe jọgburu onwe ya ma kwuo okwu dị oke egwu. Dịka ọmụmaatụ, o kwuru na ntụziaka n'oge ọchụchọ ma kwuo, sị: n'ebe ahụ ka ha ga-achọ. E mesịrị chọta Nicky na ntụziaka ahụ.
* Ná mgbakọ otu izu gara aga site n'aka ụmụaka ndị torola eto, otu nwa agbọghọ si 15 nwetara Barten nke ukwuu (onye a mara ikpe) wee dinara ruo oge ụfọdụ. Mgbe ọ teta, ọ chọpụtara na uwe ya ejirila na-enwe obi mgbawa. O nwere mmetụta nke ịbụ onye a na-enwe mmekọahụ.
* Joos Barten jụrụ mgbe a na-ajụ ajụjụ: ị nwere ike inwe mmekọahụ na ozu? Ọ bụghị ajụjụ nkịtị. Ndi Nicky ama akpa ke akpama?
* Ụbọchị mbụ nke Nikcys na-apụ n'anya ndị ndú ụlọ mkpọrọ siri ọnwụ na ya agbaala onwe ya ọsọ, n'ihi ya ọ dịghị mkpa ime nnukwu mkpu. Ma akpụkpọ ụkwụ ya ka nọ n'ụlọ ntu ahụ. Ọzọkwa: ọ bụrụgodị na ọ gbapụrụ onwe ya, ọ pụkwara ịdaba n'aka onye ọ bụla, ya mere, nke a bụ echiche efu. Ọ bụ nzube Nicky ga-alọghachi azụ ọzọ? Joos B nwere obi ụtọ (ọ bụrụgodị na ọ ga-efu efu) mana ọ gwaghị nne na nna Nicky, nke ọ ga-emekarị. Ndi enye ama enen̄ede ọfiọk ke enye akan̄wam Nicky ke nditịn̄ ufan 'ufan ufan'?
* E nwekwara njikọ na 'ndị ọkachamara', ị maara, ndị ahụ dị n'elu iwu. Ọ bụrụ na ha emee ihe omempụ, ha nwere ezigbo ndị enyi ma na-arịọ ka ha mechie iwu ha. Otu n'ime ndị ndú nke ụlọ ọrụ ntorobịa ahụ rụrụ ọrụ na Ngalaba Ikpe Ikpe. Nwoke a anọghị n'ebe ahụ.
* Ndị a bụ nanị ole na ole n'ime ihe dị n'akwụkwọ a nke na-atụ aro na ndị si n'ogige ahụ na-etinye aka na Nicky. Maka m ọ bụ ihe doro anya: ma enwere njikọ dị n'etiti ndị Barten na Jos B, maọbụ Jos B enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na ya.
21 September 2018 na 15: 17
Jeemig, ihe niile a na-eche echiche bara uru, ma mgbe ụfọdụ m na-agbanahụ Matrix ahụ, m na-enwere onwe m ihe nkiri, m ga-enwe ike ime ya.
21 September 2018 na 17: 06
Enwere ụmụaka gburu, ọ na-eme ebe nile ..
21 September 2018 na 17: 09
Ihe mberede ụgbọala ahụ dị mma.
22 September 2018 na 12: 45
Ugbu a, a mara ọkwa na Jos B na-adabere na ikike ya ịgbachi nkịtị: https://www.nu.nl/binnenland/5474894/advocaat-jos-b-beroept-zich-vooralsnog-zwijgrecht.html
Dị ka ọkàiwu ya si kwuo, anyị ekwesịghị ịhụ nke a dị ka ihe amaokwu nke ikpe ọmụma, n'ihi na ọ bụ, n'ezie, 20 afọ gara aga: "Ịkọwapụta nwere ike dị mkpa, mana n'oge gị. Kedu ka ị ga-esi akọwa ihe banyere 20 afọ gara aga? Gbalịa ịghaghachi azụ. "
Mba, amaghi m ma eri X-ray X-XIX afọ gara aga, mana ma m gburu nwa n'oge ahụ. Ntak emi enye mîdọhọke ite ke enye akanam enye mîdịghe idịghe? Nke ahụ ga-ekwe omume n'enweghị nkọwa ọzọ.
Ọ na-echetara m ike igbu Els Borst. Bart van U. kwusiri ike na mbụ, ma onye ọka iwu ya maara na ya ga-ekwu okwu mgbe e mesịrị. Nkwupụta o mechara mee abụghị ihe ezi uche dị na ya: mgbe ọ bụ afọ 7, ọrịa ọkụ na-enye ya n'ọhụụ iji gbuo onye na-ahụ maka euthanasia. Iwu euthanasia adịghị n'ebe ahụ n'oge ahụ, ma mgbe ọ bịarutere na 2001, nke mbụ chere 13 afọ ma jiri cycled si Rotterdam ruo Bilthoven ịkpọ oku na Borst ma jụọ maka ebe Wim Kok. O choghi inye ya ya, ya mere, o bughachiri ulo ihe dika 4 awa. O mere mgbalị ọzọ ịzụta okwu Kok, ma mgbe ọ rutere Borst, ọ chọpụtara na ọ bụ ya maka iwu euthanasia, ya mere o gburu ya. O mere nke a na 41 na-egwu egwu, ma n'ụzọ dị otú ahụ na ọ na-ebu ụzọ mata ma e gburu ya ma ọ bụ na ọ dabara na ya adaba n'ime egwuregwu ya.
N'agbanyeghị nke a? Ma nke a: Borst gwara ndị mmadụ na onye nọ n'ọnụ ụzọ ahụ rịọrọ maka adreesị Kok. O kwuru banyere 'okenye'. Ị bụ afọ 39 ọ bụghị onye ga-akọwa Borst dị ka 'okenye'.
23 September 2018 na 12: 57
Ka ọ dịgodị, a ka nwere akwụkwọ akụkọ siri ike na YouTube. N'ihi na ọ bụrụhaala na ọ na-ewe nke ọma, ebudatara ha ikikere iji weghachite.
" Anọ ANN, John De Mol, ikike ikike ikikere 2: Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders BV
Olee otú mgbasa ozi na-esi kọwaa akụkọ ha na nyocha nyocha ma nọgide na-atụgharị akụkọ ha n'echeghị echiche (Jos Brech) »
Nleta nile: 15.960.135
SandinG op Libya gosipụtara mba mba Europe ga-abụ nke mbụ Turkey ga-ebu
Marcos op Onye ntorobịa nke oge a chọrọ imejupụta agụmakwụkwọ maka agụmakwụkwọ (gulags) na ihu igwe
SalmonInClick op Onye ntorobịa nke oge a chọrọ imejupụta agụmakwụkwọ maka agụmakwụkwọ (gulags) na ihu igwe
AnOpen op Onye ntorobịa nke oge a chọrọ imejupụta agụmakwụkwọ maka agụmakwụkwọ (gulags) na ihu igwe